u-Moreeng ucela ukugxila kabusha kudlalwa ne-Thailand
u-Hilton Moreeng ucele ukugxila okusha njengoba ama-Momentum Proteas Women elungiselela umdlalo olandelayo kwi-ICC Women’s T20 Cricket World Cup.
Njengoba kungaphansi kwamahora awu-24 ngaphambi kokuthi i-South Africa ibhekane ne-Thailand e-Manuka Oval e-Canberra, umqeqeshi ugcizelele ukubaluleka kokungabuki phambili kakhulu.
“Bonke abadlali bayazi ukuthi kumele uphinde uqalelephansi,” kugqugquzela u-Moreeng.
“Kumele siqiniseke ukuthi njengeqembu, senza kahle ezikhathini ezibalulekile zomdlalo futhi sinqobe izimpi ezincane.”
“Ekugcineni, ukhiye ukuthatha izinto ngokuza kwemidlalo.”
Imbono yakhe ifika emuva kokuthi i-South Africa inqobe ngezinti eziyisithupha ihlula i-England. Futhi njengoba kube ukusebenza kweqembu lonke, u-Moreeng uncome ukukhula okwavezwa abadlali abadala. Ikakhulukazi u-Mignon du Preez.
Edlala kumdlalo wakhe wekhulu we-T20 International, lomdlali oshayayo wagcina ukuzotha kwakhe kwi-over yokugcina yomdlalo njengoba eshaye u-six no-four i-South Africa ijaha u-124 kwasala amabhola amabili.
“Indlela u-Mignon abhekana nencindezi ukuze sinqobe – ukukhululeka kanye nokuzotha – yilokho ekade sikufisa njengeqembu.”
“Ekupheleni kosuku udinga abadlali abanamakhanda azothile ezikhathini ezinjalo futhi wasebenza kahle.”
u-Moreeng ulindele okukhulu okufana nalokho uma iqembu lakhe libhekana ne-Thailand, ezithola ekugcineni kwa-Pool B, emuva kokuhlulwa kabili idlala ne-West Indies ne-England ngokulandelana kwabo.
i-Thailand ngathi ayaziwa kuma-international, futhi lokhu i-World Cup yabo yokuqala. Kodwa ama-Proteas kanye no-Moreeng bayayazi ingozi bona nanoma yiliphi iqembu elingayiletha kwikhilikithi emfushane.
“Bayiqembu elilungile, elisafufusa elihlasela nge-spin. Kubalulekile ukuthi sigxile kulokhu esingakwenza njengeqembu ngoba balambele ukunqoba umdlalo. Umdlalo we-T20 – kungenzeka noma yini.”
Ukushintsha kusukwa entshonalanga kuyiwa empumalanga ngasolwandle, ama-Proteas azilungisele ushintsho ngesimo sokudlala futhi nethuba lokuthi noma imuphi oshayayo azibone emaphephendabeni.
“Inokuhamba kancane. Ayikho i-turn eningi kulokhu esikubonile kweminye imidlalo. Ngosiko kutholakala ama-runs amaningi ngakho silindele inti enhle.”
“Ngokwabashayayo, sinabadlali ababili noma abathathu abangashaya ama-boundaries, ngakho kukhombisa isipiliyoni esikhona kwiqembu,” enezezela u-Moreeng.
“Kuthathe isikhathi ukuqiniseka ukuthi sihlanganise kahle futhi kuyasijabulisa. Awazi ukuthi ubani ozodlala kahle ngosuku ngoba bonke bangajikisa umdlalo.”
Umdlalo wase-Canberra owokuqala wemidlalo emithathu ezinsukwini ezinhlanu. Ama-Proteas azoya e-Sydney ngoMgqibelo ukuqhubeka nokuzingela indawo kwi-semi-final besazodlala ne-Pakistan ne-West Indies.
Owemidlalo eyikhulu u-Du Preez unqobise ama-Proteas ngokunqoba okudumile i-CSA ihalalisela u-Mignon du Preez ngekhulu lama-T20I i-CSA ibala abesifazane abazongena kwi-academy ngo-2020 Ama-Proteas Esifazane ahlulwe kancane iqembu lasekhaya kumdlalo wokugcina wokulungiselela i-T20 World Cup Kuqakaza u-Luus ama-Proteas enqoba umdlalo wokulungiselela bedlala ne-Sri Lanka Ama-White Ferns ahlula ama-Proteas Esifazane ngo-3-1 Ama-Proteas Esifazane azigcine kwi-T20I series ngokuthi anqobe u-Lee uzimisele ngokuguqula i-T20 Ama-Proteas Esifazane angemuva ngo-2-0 kwi-T20 series u-Khaka ugqugquzela ama-Proteas Esifazane ukuthi ahlangane Ama-Proteas Esifazane akhokhiselwe ukushaya okungaphansi kwenjwayelo